Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Sabti Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub - Gool24.Net
Bayern Munich waxay wada-hadallo kula jirtaa Chelsea oo ay ka doonayso 19 jirka garabka weerarka uga ciyaara ee Callum Hudson-Odoi oo ay sannad amaah ah ku qaadanayso. (Sport Bild)
Weeraryahanka reer France ee Ousmane Dembele oo 23 jir ah ayaa beddelay go’aankiisii ku aaddanaa Manchester United, laakiin Barcelona ayaan iyaduna dhinaceeda wali ka xayirin inuu tago Old Trafford. (L’Equipe)
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Manchester United ee Paul Pogba oo 27 jir ah ayaa telefoonka kula hadlay Ousmane Dembele si uu ugu qanciyo inuu yimaado Old Trafford. (Mundo Deportivo)
Tababaraha Man United, Ole Gunnar Solskjaer ayaa isku diyaarinaya inuu iibiyo Daniel James oo 22 jir ah, si uu qasnadda kooxda ugu shubo qayb ka mid ah lacagta kaga xidhan saxeexa weeraryahanka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho. Solksjaer ayaa doonaya in loo keeno Sancho, balse waxay dhibaato kale ka haysataa in madaxda kooxda uu ku qanciyo inay iibiyaan James si lacagta ka dhiman dalabkii ay gudbiyeen uu u sameeyo. (ESPN)
Leeds United ayaa dib usoo celisay damaceedii laacibka Manchester United ee James, waxaanay diyaar la tahay £25 milyan oo Gini. (Football Insider)
Chelsea ayaa u sheegtay Inter Milan inay danaynayaan inay iibiyaan difaacooda Marcos Alonso xagaagan, iyadoo kooxda Talyaaniguna ay muujinayso xiise ah inay amaah ku hesho 29 jirkan reer Spain. (Goal)
Tababaraha Crystal Palace ee Roy Hodgson ayaa sheegay in aanu wax wada-hadallo ah la yeelanin Arsenal oo la sheegay inuu ka doonayo 20 jirka reer England ee Reis Nelson. (Mirror)
Difaaca Manchester United ee Diogo Dalot oo 21 jir ah ayay doonaysaa kooxda AC Milan oo wada-hadallo kula jirta, laakiin Roma ayaa sidoo kale laacibkan reer Portugal u rabta inay soo raacsato Chris Smalling oo 30 jir ah. (Sun)
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Lucas Torreira oo 24 jir ah ayaa ku sugan waddanka Spain oo maanta oo Sabti ah uu tijaabada caafimaadka ugu mari doono Atletico Madird oo sannad amaah ah ku qaadatay, waxayse haysataa qodob kale oo siinaya inay £18.1 milyan si rasmi ah ugula wareegi karto. (AS)
Tottenham ayaa iskuday cusub ka samaynaysa difaaca Inter Milan ee Skriniar oo 25 jir ah, waxaanu Mourinho doonayaa inuu ka dhigo saxeexiisa ugu dambeeya kaddib markii uu gacanta ku dhigay Carlos Vinicius oo uu Benfica amaah kaga soo qaatay. (Standard)
Tottenham waxa kale oo ay weydiisatay Juventus haddii la heli karayo difaaca dhexe ee reer Turkey ee Merih Demiral, laakiin Juventus ayaa 22 jirkan u aragta mustaqbalkeeda. (Goal)
Mohamud A wali says:
Natiijada ciyaaraha kusoo dara